First ... 32 40 41 42 43 44 Last
07-05-2016 04:39 AM #411
စလုံးကပါ ကိုဖလင့်စ်ရေ ..
ဟုတ်ကဲ့ဗျာ .. အဲလို စပ်ထားပြီးသားမျိုးလိုခြင်တာပါ။
အဂလိပ်လိုတွေ ဘယ်လိုခေါ်လဲလည်းမတိ၊ Cement/Grout/BondingAgent/Concrete ရှုက်နေတာပဲ ..
အွန်လိုင်းလိုက်ရှာတာလည်း construction တွေအတွက် HeavyPremix Supplier တွေပဲ တွေ့လို့
သဲရောရမယ်, ပြီးတော့ ဘာရောရအုန်း မလဲဟင် ///
Last edited by meJit; 07-05-2016 at 04:50 AM.
2323, Alley Cats, Grace, Jin_kaleat, MNO.BN, RunAtServer, THIHA
07-07-2016 01:17 AM #412
ရပြီဗျား ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ Qoo10 မှာတွေ့
ရောင်းတာက Selfix store, Outlet တွေများသား ..
သုံးကြည့်တာ အတော်ပျော့တယ် ..ဒါနဲ့ ဘိလပ်မြေ ပဲဝယ်လာတာနဲ့ နဲနဲရောလိုက်တော့မှအတော်ဖြစ်သွားရော
DAP-CONCRETE-PATCH = 18$
Polymer Mortar Small papck = 4.xx$
2323, Alley Cats, Grace, Jin_kaleat, MNO.BN, RunAtServer
07-07-2016 01:49 AM #413
'grS r[kwf oJa&m../
tufaewmudk zmr,fqdk&if aysmhawmh ydkawmifaumif;ao;/ BudKBudKMum;Mum; 0ifwmaygh../
"mwfyHk&dkufNyD; wifygvm;/ b,fvdkrsdK; oHk;&ifaumif;rvJ Munfh&atmif../
07-08-2016 05:04 AM #414
သဲရောရမယ်, ပြီးတော့ ဘာရောရအုန်း မလဲဟင်
udkrD;*spf acgifrdk;pvuf u tufaewm b,favmufMuD;vJ.. pvufudk jzdK?azmufcs jyD;jyefvkyf&ifvJ tcef hroif h&if tqufuae a&xyf,dkwwfygw,f?
tay:u jyxm;wmu bdvyfajryg? uGefu&pfjyefavmif;zdk hqdk&if oJ ausmuf xyfa&m&ygOD;r,f?
Grout u bdvyfajreJ hoJ tcsdK;us a&mxm;wmyg? 'DrSmawm holh hudk NSG( Non Shrink Grout)vkd hac:Muw,f? tJ'gudk odyfrMuD;wJ htaygufawG(50-150 rDvD0ef;usif) udkydwf&if oHk;Muygw,f? rqvm Murf;wJ hae&mawGrSm oHk;Muygw,f?
White Cement u bdvyfajr tjzLyg? ol hudk aMuGjym;uyfjyD; Mum;cH tqufawGudk jyefjznf hwJ h infilled cement taeeJ hoHk;ygw,f? 'D[mawm hoHk;vdk hr&ygbl;
wpfck&dSwm tpfudk.. vufylwdkufcsif&ifawm h pDvDuGefudk tufaMumif;xJ a&mufatmif xnf hjyD; tay:uae tpfudk0,fxm;wJ hPatch grout eJ hqufaMumif;wpfavsmuftHkxm;vdkuf&if tqifajyygvdrf hr,f..
tpfudk HDB rSm aewmqdk&if town Concil taMumif;Mum;vdkuf&if olwdk hvmjyifay;ygvdrf hr,f?
Last edited by Alley Cats; 07-08-2016 at 05:12 AM.
2323, flintz, Jin_kaleat, meJit, MNO.BN, RunAtServer, talkyboy, THIHA, weithet
07-09-2016 01:46 PM #415
Originally Posted by Alley Cats
grouting ဆိုလို့ မဆီ မဆိုင် ပြော လိုက် ဦး မယ် ဗျာ။ ဆိုက်ထဲက ဖအုပ်ထုပ် တစ်ကောင်။ တော် တော် လည်း ပျော် တတ်၊ နောက် တတ် တဲ့ သူ ပါ။ သူ့ တို့ မင်္ဂလာ ဆောင် တဲ့ ရက် နဲ့ တွက် ကြည့် တော့ သူ့ ကလေးက ကြီး နေလို့ Why လို့ မေးလိုက် တော့ သူက
I grouting first တဲ့။
2323, Alley Cats, flintz, Grace, Jin_kaleat, meJit, RunAtServer, shadow69, talkyboy, THIHA
07-11-2016 04:53 AM #416
pvHk; u HDB udk jyifwmqdk owdxm;aemf/ omref tao;pm; aq;okwf zmax; taygufaxguf jyifwm jyKwm jyoem r&Sdayr,fh ol h&J h eH&H rsufESmusuf (tay: xyf Murf; ) udkxGif;wm bmnm tBuD;pm; qdk jyoem&Sdw,f/ vdkifpif &SdwJholeJ hjyJ jyif&r,fwJh/ ywf0ef;usifu owdxm;rdavmuf atmif rqlapeJ/ awmfMum rsufESmusufudk xkvdkufxGif;vdkufvdk htay: xyfu oGm;wdkif &ifuGdKifaetHk; r,f..
2323, Alley Cats, Grace, Jin_kaleat, meJit, RunAtServer, shadow69, weithet
07-12-2016 07:20 AM #417
တောင်းကောင်ဆယ် က expense တဝက်စိုက်ပေးမယ်ပြောလို့ contractor စောင့်နေပါတယ်။ contractor လည်းသူတို့ပဲ ဆက်သွယ်ပါမယ်တဲ့ ..
အက်တာ အတော်ကြီးတယ်ဂျ ။.ဆွဲဖြိုချလိုက်တာ အတော်နက်ပြီး အလည် သံချောင်းပါ ပါလာ ..
ဟုတ် ကိုရောဒရေ TQ
အဲ .. ကို့ဟာကို ဖောက်လို့ရဘူးလား ဒီက Drill တောင်ဝယ်ဖို့ကြည့်နေတာ ;;;
ဒါနဲ့ aircon တခန်းက လုံးဝမအေးဗျာ ,, တလလောက်ရှိပြီ ,system 2
online လိုက်ရှာတာ အားမရတာနဲ့ အနားနီးတာ သွားမေးတာ လာကြည့်ခပဲ ၈၀တဲ့ No waiving ဆိုလို့ ရပါပြီဆိုပြီး ပြန်ခဲ့ရတယ် .. chop chop!!!
ဖြစ်နိုင်တာ Gas ကုန်တာ ( မထည့်တာ ၁၀ နှစ်နီးပါး ပဲ ) (မေးကြည့်တော့ Full gas refill 150+$ တဲ့) , or may be Capicitor လဲတာ ( 130+ around?),
Aircon ဘယ်မှာ စိတ်ချရလည်း ပြောပြဂျပါအုန်းဗျာ ...
2323, Alley Cats, flintz, Grace, Jin_kaleat, RunAtServer, weithet
07-12-2016 10:18 PM #418
အဲဒီလောက် မလွယ်ဘူး ကိုမီးခြစ်.. တိုင်တွေ ပတ်ကုန်လိမ့်မယ်..။ မလုပ်နဲ့..။
Last edited by flintz; 07-12-2016 at 11:05 PM.
2323, Alley Cats, Grace, Jin_kaleat, meJit, RunAtServer
12-28-2016 03:35 AM #419
အမျိုးတွေ အားလုံး Merry X'Mas andaVery Happy New Year ပါလို့
2323, Alley Cats, HlaingKaLayThin, Jin_kaleat, kohtwe, nkhant, RunAtServer, softsin
02-07-2017 06:18 AM #420
ရန်ကုန်မှာ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် သီချင်းနားထောင်ကောင်းမဲ့ မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားလို့ကောင်းမယ့် နိုက်ကလပ်
ဒါမှမဟုတ် လူစည်တယ့် ကလပ်ပေါ့
ဘယ်သွားရမလဲဂျာ ဒီခါပြန်ရင် သွားမို့ ...
မပြန်တာလဲကြာ မရောက်တာလဲကြာ ,,,
သူငယ်ချင်းတွေလဲ ဘီယာဆိုင် အနှိတ်ခမ်းပဲသိတယ် ဟဟ
ဟိုးအရင်ကဆို ပိုင်အိုးနီးရား Yourk Lane
အင်းယားလမ်းပေါ်က ဝါဝါဝင်းရွှေခြံထဲက (နာမယ် မေ့ တွားပြီ ???? )
ရန်ကုန် အင်တာနေရှင်နယ် ဟော်တယ်က (ဘာတုန်းး မသိတော့ ???? )
ရွှေဂုန်တိုင်နားက ရောပဲ ဘာလဲမသိ ....,
ဒါနဲ့ မှတ်မှတ်ယယကတော့ အင်းယားမြိုင်ထဲက LimeLight ပေါ့ .., ခြံထဲက ၂ထပ်နဲ့ ..,
ဘယ်သူတွေမှီလိုက်လဲမသိဘူး 1990 to 1995 around တွေထင်မိတာပဲ
ဒီကပြီးတော့ သိမ်ကြီးဈေးက (ဘာနာမယ်တုန်း?)
ဒါနဲ့ ဟို အမြင့်ကြီး ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ဘား / Restaurent လား မသိ အတော်လှတယ် ပြောပြကြပါ ..
Last edited by meJit; 02-07-2017 at 06:23 AM.